कपालका स्टाइलहरू - शैलीका साथ पुरुषहरू शैलीको साथ पुरुष (पृष्ठ २)
किशोर कपाल काट्ने
यी किशोर कपाल काटेर के प्रचलनमा छ पत्ता लगाउनुहोस्। तपाइँ सबै मौलिक किस्महरू पत्ता लगाउन मन पराउनुहुनेछ।
यदि तपाइँ क्लिपरको साथ कपाल काट्ने तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँ एक द्रुत ट्यूटोरियल छ ताकि तपाइँ यसलाई चरण-दर-चरण गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईलाई थाहा छ केराटिनले कपालको लागि धेरै फाइदाहरू छन्? यहाँ हामी संकेत गर्छौं कि तपाईले यो महान प्रोटीनको साथ कुन उपचार पछ्याउन सक्नुहुन्छ।
केटाको कपाल कसरी काट्ने भनेर चरणबद्ध रूपमा पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो कस्तो गाह्रो काम छैन यदि तपाईले यसलाई धैर्यताका साथ गर्नुभयो भने।
बच्चाहरु लाई केटाहरु को लागी आधुनिक कपाल काट्न को लागी साहस गरेर आफ्नो शैली सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ती सबै आदर्श छन्, पत्ता लगाउनुहोस्!
पुरुषहरु मा धमाका प्रवृत्तिहरु सेट र यहाँ हामी यो वर्ष के लगाउने र के आधुनिक कपाल काट्ने यो लगाउने एक सानो समीक्षा दिन्छौं।
दाह्री संग वा दाह्री बिना? यो महान बहस को तहत हामी स्पष्ट गर्न सक्छौं कि धेरै पुरुषहरु र महिलाहरु के सोच्दछन्, चाहे यो लगाउन, वा छैन।
कसरी घर मा कपाल काट्ने
हाम्रो सानो ट्यूटोरियलको साथ जान्नुहोस् कसरी तपाईं घर मा कपाल काट्न सक्नुहुन्छ। यो निस्सन्देह एक विकल्प हुनेछ जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ कि यो गर्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै स are्केतहरू छन् कि निर्धारण गर्न सक्दछ यदि तपाईं गाउँमा जानुहुन्छ भने। यस विषयमा गहिरो जान, अन्य समाधानहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
हिपस्टर हेयरस्टाइल फेसनमा छ र हरेक वर्ष यो एक विशेष र चापलुसी स्पर्शको साथ पुन: स्थापित हुन्छ। तिनीहरूको शैली र रचनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
पुरुषहरूमा पछाडि कमेड गरियो
लामो कपाललाई हल्का पार्न सक्षम बनाउनका लागि पुरुषमा कंघी पछाडि अर्को संस्करण हो। तपाइँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फेला पार्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा राम्रा कपाल प्रदान गर्दछौं ताकि तपाईले एउटा शैली छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको शैली र व्यक्तित्वमा उत्तम सूट गर्दछ।
पुरुषका लागि उत्तम कपालको रंग
फरक कपालको र of्गको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? यदि यो तपाईंको प्रस्ताव हो भने, हामी यहाँ पुरुषहरूको लागि उत्तम कपाल रंग प्रस्ताव गर्दछौं।
स्टाइलको साथ पुरुषहरूमा हामी तपाईंलाई उत्कृष्ट क्लासिक हेयरस्टाइल वा कटहरू प्रस्तुत गर्दछौं जुन शैलीबाट टाढा नजानेकाले उनीहरूले शान र फेसन मार्क गरिरहन्छन्।
कसरी छोटो कपाल मा एक लहराती पर्म प्राप्त गर्ने
छोटो कपालमा लहरी पर्म प्राप्त गर्नका लागि कुन चरणहरू अनुसरण गर्ने छन् पत्ता लगाउनुहोस्। यो एक हेयरस्टाइल हो जुन अब ट्रेंडसेटि is भइरहेको छ।
मान्छे मा फीका कटौती
फेड कपालबाट को लागी सबै शैली र काटहरु पत्ता लगाउनुहोस्। एक बाल कटाई जो यसको सबै भिन्नताहरूको साथ प्रवृत्ति सेट गर्न जारी छ।
पुरुषहरूमा प्लेटिनम गोरा
धेरै वर्ष अघि प्लेटिनम गोराले धेरै पुरुषहरूमा सेन्टर स्टेज लिन थाल्छ। यो एक प्रवृत्ति सेट र तिनीहरू केहि प्रसिद्ध थिए ...
पुरूषमा कपाल कडा
बहुविध सुविधाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन कपाललाई सिधा गर्नका लागि उपचार, उत्पादनहरू वा उपकरणहरूको साथ त्यो सही समाप्तको लागि
पुरुष अनुहारका प्रकारहरू
हामी एक मान्छे को अनुहार प्रकार को प्रकारहरु थाहा छ कि तपाईं आफ्नो आकार अनुसार केश कपाल को प्रकार लगाउन सक्नुहुन्छ को मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ।
आधुनिक केटाहरूको लागि कपाल
हामीसँग आधुनिक रहन चाहने ती सबै केटाहरूका लागि उत्तम कपाल कटाईमा एउटा रमाईलो सेक्सन छ।
सबै केयर र आफ्नो कपाल लगाउने तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस् कि अनौपचारिक र अव्यवस्थित रूप प्राप्त गर्न, यो तपाईंको आफ्नै आकार र शैली चिन्ह लगाउँदछ।
पुरुषमा कसरी पर्म गर्ने
यदि तपाइँ दृश्य परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई प्रस्ताव दिन चाहन्छौं कि परम विकल्प एक विकल्प हो जसले तपाईंलाई उदासीन छोड्दैन, हामी यसलाई कसरी विस्तार गर्ने भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं।
रंग खरानी खरानी र
ग्रे रंगको कपालले महिला र पुरुष दुबै कालो रंगमा लगाउन चाहान्छन् र यहाँ हामी आफैं कसरी र to लगाउने भनेर देखाउँदछौं।
हेयरलाइन भएका पुरुषहरूका लागि कपालका स्टाइलहरू
सबै मानिसहरु को लागी जो आफ्नो कपाल मा recesses गर्न को लागी हामी तपाईंलाई पुरुषहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो केश शैली को लागी राम्रो सल्लाह दिन्छौं।
मानिसमा खैरो कपाल
पुरुषमा खैरो कपाल अपवाद मा एक छलांग लिएको छ, अब यो उमेर मा निर्भर बिना धेरै टाउको मा सबै सफलता संग बोकेको छ।
पुरुषहरूको लागि छोटो कपाल
छोटो कपालका स्टाइलहरूमा यो भर्खरको फेसनको लागि, हामी यहाँ तपाईंलाई उत्तम शैलीहरू दिन्छौं जुन शैली र मौलिकता मार्क गर्दैछ।
पुरुषहरूका लागि लहराती परम
वेभी पर्म पुरुषहरूका लागि लाभदायक विकल्प हो जुन एक दर्शनीय कर्ल चाहन्छन्। उसको टेकनीक कस्तो छ पत्ता लगाउनुहोस्।
लामो केश शैली
त्यहाँ लामो केश शैलीहरू छन् जुन उत्कटता र ईर्ष्या सिर्जना गर्दछ। यी कुन केश शैली को तपाईं त्यो महान माने को लागी लगाउन सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्।
पुरुषहरूको लागि बो
पुरुषहरूको लागि धनुष एक प्रवृत्ति हो जुन उनीहरूलाई फैशनेबल बनाउँछ। यदि तपाइँको लामो कपाल छ र तपाइँ त्यसलाई उठाउन चाहानुहुन्छ भने, धनुहरूको प्रकारहरू हेर्नुहोस् जुन अवस्थित छ।
पुरुषहरूमा गोरा हाइलाइटहरू प्राथमिकता हुन् जुन अझै फेसनमा छ। हामी यसलाई घर मा लागू गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका र सबै भन्दा राम्रो सुझावहरू।
कपाल कर्लिंग उत्पादनहरू
यदि तपाईं समय-समयमा घुमावदार वा लहरदार कपाल पाउन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई आफ्नो कपाल कर्ल गर्न उत्तम उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्दछौं र यसरी निर्दोष उपस्थिति प्राप्त गर्दछौं।
कसरी कुरियर कपाल छ
जहाँसम्म तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न, कर्लियर कपाल पाउनु वा पर्मेड प्राप्त गर्दा, यो अवस्थित छ। घुमाउरो कपाल प्राप्त गर्ने सबै तरिकाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
पुरुष: कसरी लामो कपाल छ
यदि तपाईं लामो कपाल चाहनुहुन्छ भने, यहाँ उत्तम सुझावहरू छन् कि परिवर्तन दिन र आफैंलाई अर्को छवि दिन सक्षम हुन। तपाईंसँग तिनीहरूको हेरचाहको लागि उत्तम विचारहरू हुनेछन्।
सर्जियो रामोस कपाल
सेरिजियो रामोसको हेयरस्टाइलहरूको संग्रहमा सबै स्वादका लागि शैलीहरू सामेल छन्, धेरै छोटोदेखि लामो कपालसम्म, टुपेज र साइड पट्टिहरू।
पुरुषहरूको लागि विक
पुरुषका लागि हाइलाइटहरू एक विवादास्पद कपाल विकल्प हुन्। यहाँ हामी तपाईलाई निर्णय लिन सहयोगको लागि यस शीर्षकमा थप जान्छौं।
हरियो कपालले तपाईंलाई याद नलगाउन दिनेछ। सेलिब्रेटीहरू पत्ता लगाउनुहोस् जसले आफ्नो कपालको लागि यस हडउने रंगमा शर्त लगाउँछन्।
समुराई कपालको बारेमा सबै कुरा जान्नुहोस्। यो कसरी गर्ने, लामो केशको लागि यस केशको बारेमा आवश्यकताहरू केहि बढि के हुन्।
पुरुषहरूको लागि उत्तम आधुनिक हेयरकटहरू पत्ता लगाउनुहोस्। सबै आकार र कपाल को प्रकारहरु को लागी स्टाइलिश कटौती को विचार।
पुरुषहरूका लागि लहरी कपालको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्: दैनिक जीवनको लागि सुझावहरू र स्टाइलिश हेयरकट र केश विचारहरू।
बैंग्स संग कपाल
पुरुषहरूका लागि बै bang्गका साथ उत्तम हेयरकटहरू पत्ता लगाउनुहोस्, साथै तिनीहरूको फाइदाहरू पनि: छोटो, मध्यम र लामो बैs्गहरू।
कसरी छोटो कपाल को शैली
जान्नुहोस् कसरी छोटो कपाल चरणबद्ध गर्दै चरण-दर-चरण निर्दोष कपाल प्राप्त गर्न जुन तपाईंको क्याजुअल र औपचारिक रूप दुबैसँग मिल्दछ।
मध्यम लम्बाइ कपाल काट्ने
मध्यम लम्बाइ कपाल काट्ने बहुमुखी, चापलुसी, र प्रवृत्ति मा छन्। यस उपायका लागि अवस्थित सब भन्दा उत्तम विकल्पहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
पुरुषहरूको लागि उत्तम घुमाउरो कपाल कटाई पत्ता लगाउनुहोस्। धेरै छोटो कटौती देखि लामो कपाल को लागी, रमाईलो मध्यम लम्बाइ को माध्यम बाट।
एक टर्पी कसरी बनाउने
यस पोष्टमा तपाई क्रमबद्ध कसरी गर्ने सिक्नुहोस् चरण-चरणमा जान्नुहोस् ताकि तपाईको शैली अन्य सबैबाट बाहिर आयो। अब प्रविष्ट गर्नुहोस् र सबै रहस्यहरू जान्नुहोस्।
पुरुषहरूको लागि उत्तम आधुनिक केश शैली यहाँ फेला पार्नुहोस्। यदि तपाईंले आफ्नो दृश्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने, यो तपाईंको क्षण हो। अवसर छोड्नुहोस् र प्रविष्ट गर्नुहोस्!
छेउमा सबैभन्दा उत्तम छोटो कपाल कटाई पत्ता लगाउनुहोस् र पुरुषहरूको लागि शीर्षमा लामो। उनीहरू कसरी बनेका छन्, केश विकल्प र उनीहरूको फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
सैन्य कटौतीको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। यसको कस्ता फाइदाहरू छन् र सेनामा जन्मेका यी कपालका भिन्नताहरू के-के हुन्?
पुरुषहरूमा सेतो कपाल
सेतो कपालको बारेमा सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। कारणहरू, खैरो कपाल, कस्मेटिक र पोषण रणनीति र अधिकको लागि अवस्थित विकल्पहरू!
पुरुषहरूको लागि ग्रेडियन्ट कपाल
क्लासिक शैलीमा पुरुषहरूका लागि कसरी फिक्स्ड कपाल काट्ने बारे जान्नुहोस् र तपाइँको अनुहारको आकारलाई अनुकूल बनाउन कुन तरिका प्रयोगमा राख्न सक्नुहुन्छ।
फेसनमा रहेका पुरुषहरूका लागि कुन लामो कपाल काट्ने को हो भनेर पत्ता लगाउनुहोस् र त्यो को हो जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। यदि तपाईं अधिक सुन्दर हुन चाहनुहुन्छ र तपाईंको राम्रो कपाल छ भने, लामो कपालको लागि यी मध्ये कुनै एक छान्नुहोस् र तपाईं सफल हुनुहुनेछ।
यो वर्ष २०१ changes परिवर्तन, शैली र नयाँ प्रचलनहरूको बर्ष हो। यो नयाँ समय हो। शरद inतुमा कपाल कसरी हुन्छन्?
कपाल तपाईको उमेर अनुसार छनौट गर्न
कि पुरुषहरु को कपाल को छनौट को बारे मा परवाह छैन? यो सत्य होइन। यो त्यस्तो चीज हो जुन बच्चाहरूको रूपमा हामी प्रायः याद गर्दछौं।
के तपाईसँग आयताकार अनुहार छ? स्टाइलिंग र अनुहारको कपालका लागि यी नियमहरू पालना गर्नुहोस्
हामी तपाईं लाई आयताकार अनुहार छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछौं र हामी तपाईंलाई सबैभन्दा उचित हेयरस्टाइल र दाह्रीको प्रकारको बारेमा उत्तम सल्लाह दिन्छौं।
लामो कपाल काट्ने
जोसँग लामो कपाल छ र हेराई परिवर्तनको लागि रोज्नु हुन्छ, यसलाई काट्नु बिना नै, २०१ tre ट्रेंडमा थुप्रै विकल्पहरू छन्।
राम्रो कपालको साथ पुरुषहरूले गरेका चार साधारण गल्तीहरू (र कसरी त्यसलाई ठीक गर्ने
हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कि केशहरू केहि धेरै सामान्य गल्तीहरूको लागि छन् राम्रा कपालको साथ पुरुषहरू।
पुरुषहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो कपाल कटौती
फेसनको संसारसँगै, पुरुषहरूको कपालको संसार पनि विकसित हुँदै गइरहेको छ। प्रत्येक मौसममा हामी नयाँ चलनहरूको साक्षी दिन्छौं।
पुरुषहरूको लागि केश: शैली
जस्तो एक समय थियो जब ट्पेपीहरू प्रवृत्ति थिए, आकर्षक रंगका साथ। अब एक केश शैली छ जुन शैली बाहिर जान सक्दैन: ब्रेटीहरू।
ब्राड पिट वर्षहरु मा सबै भन्दा राम्रो haircuts
हामी ब्राड पिटले वर्षौंदेखि जोखिम पाएका सबै भन्दा राम्रो हेयरकटहरूमा एक नजर राख्छौं। क्लासिक साइड पट्टिबाट surfer manes।
किन तपाईंले Zayn मलिकको नयाँ केश बनाउनु पर्छ
यदि Zayn मलिक धेरै पटक आफ्नो हेयरस्टाइल परिवर्तन किन कारण हो किनकि ऊ खोज्दै थियो ...
इवान म्याकग्रीगोरको वर्षहरूमा सर्वश्रेष्ठ हेयरकटहरू
हामी स्कटिश अभिनेता इवान म्याकग्रीगरले विगत २० वर्षमा कपाल काटिएको टाउकोदेखि पोम्पाडोरसम्म लगाएका सर्वश्रेष्ठ हेयरस्टाईलहरू समीक्षा गर्दछौं।
२०१ 2016 को प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ हेयरस्टाइल
उसको कपाल कटाईले हामीलाई वर्षौं बिभिन्न कारणका लागि प्रेरित गर्दछ। यी २०१ 2016 को प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ हेयरस्टाइलहरू हुन्।
?? राउन्ड अनुहारका लागि उत्तम केश कटाउनेहरू पत्ता लगाउनुहोस्, यदि यी सुविधाहरूसहित तपाईंको अनुहार छ भने तपाईंले कसरी कपाल काट्नु पर्छ? पत्ता लगाउनू!
पुरुषहरूका लागि ब्याs्गहरूको साथ उत्तम हेयरस्टाइलहरू
एक तर्फ, लहरी, चिल्लो र लामो। यी पुरुषहरूका लागि ब्याs्गका साथ उत्तम केश शैलीहरू हुन्।
छोटो केश शैली: हामी तपाइँलाई प्रत्येक रूप प्राप्त गर्ने तरिका देखाउँदछौं
के तपाई छोटो कपालको लागि हेयरस्टाईल खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ तपाईं छोटो कपाल र तपाईंलाई आवश्यक पर्ने उत्पादनहरूको लागि पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा राम्रो देख्नुहुनेछ
हामी 36 XNUMX भन्दा बढी फोटोहरू र प्रचलनहरू सेट गर्न सुझावहरूको साथ पुरुषहरूको लागि छोटो कपाल काट्ने समीक्षा गर्दछौं। छोटो कपाल काट्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्
बाल्मेन हेयर कउचर द्वारा तीन ट्रेंडी हेयरकट्स
के तपाई हेराइको परिवर्तनको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईको कपाल काट्ने बोर छ? यदि उत्तर एक गजबको हो, ...
कपाल झर्ने: लक्षण, प्रकार र यसलाई कसरी रोक्ने
के तपाईको कपाल झर्छ? लक्षण, एलोपेसियाका प्रकारहरू र कसरी पुरुषहरूमा कपाल झर्नेबाट बचाउने पत्ता लगाउनुहोस्। त्यहाँ के उपचारहरू छन्? यहाँ खोज्नुहोस्
यस गर्मीमा कसरी चापलुसी छोटो कपाल कटाउने
हामी तपाईको अनुहार र हालको केश प्रवृत्तिको आकारको आधारमा कुन प्रकारको छोटो कपाल काट्ने सूट गर्दछौं भनेर वर्णन गर्दछौं।
'अंडरकट': हेयरकट जो इन्स्टाग्राममा स्वीप गर्दछ
यस ह्यासट्यागको साथ करीव has०,००० प्रविष्टिहरूसँग सम्बन्धित, #undercut हेयरकट हो जुन इन्स्टाग्राम व्यापक छ। एक बहुमुखी शैली जुन ...
स्वच्छ र व्यावसायिक - पक्ष विभाजन वर्षको कपाल को स्टाइल को एक हो
छेउछाउको साथ हेयरस्टाइल २०१ 2016 मा सबैभन्दा धेरै देखिन पाइन्छ। यो दुबै क्याटवाक र सडकमा कडा उपस्थिति रहेको छ।
जो जोनासको नयाँ केशले तपाईंलाई एक वा दुई चीज सिकाउन सक्छ
छोटो पुरुषहरूले जो जोनासको नयाँ हेयरस्टाइलबाट महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिक्न सक्छन्। यहाँ हामी किन व्याख्या गर्छौं।
घुमाउरो वा लहरी कपाल? आफैलाई 80 को अराजकता द्वारा विजय प्राप्त गरौं
हामीले घुमाउरो वा लहरै कपाल भएको पुरुषहरूको हेयरस्टाईलमा सबैभन्दा नयाँ प्रवृत्तिको साथ साथै यसलाई अनुसरण गर्ने उत्तम तरिकाको बारेमा कुरा गरेका थियौं।
लामो कपाल भएका पुरुषहरूले आधुनिक समयमा धेरै निराधार पूर्वाग्रह र आलोचना सहनुपरेको छ। यहाँ हामी तिनीहरूको पक्षमा भाला भाँच्दछौं।
हामी तपाईंलाई दैनिक हेयरस्प्रेको साथ हेयरस्टाइल ठीक गर्न सुझावहरू प्रस्ताव गर्दछौं, उत्पादनको छनोट, अनुप्रयोग र यसको हटावटमा केन्द्रित।
के दाह्री र दाह्री राख्नु राम्रो हो वा नराम्रो विचार हो? यहाँ हामी तपाईंलाई यस बारेमा हाम्रो राय दिन्छौं अभिनेताहरूको उदाहरणका साथ जसले यस लुक लगाएका छन्।
तपाईंको कपाल काट्नबाट बच्न तीन गल्तीहरू
हामी तपाईंलाई बताउँदछौं कि तपाईंले आफ्नो हेयरस्टाइललाई के गर्नु हुँदैन यदि तपाईं आफ्नो केश आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईंको आत्म-सम्मान बढाउन चाहनुहुन्छ भने।
कपाल माउस - इच्छित केश बनाउनुहोस्।
कपाल माउस, व्यक्तिगत देखभाल, केश शैली, कपाल, फिक्सिडेट